तपाईँ पर्यायहरूका लागि शब्दकोश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र सम्बन्धित शव्दहरू.
तपाईँले हेर्न चाहनु भएको शव्दमा क्लिक गर्नुहोस्.
उपकरणहरू - शब्दकोशरोज्नुहोस् , वा आदेश Ctrl+F7 थिच्नुहोस् .
वैकल्पिक सूचीमा, त्यस सम्बन्धित शब्द प्रतिलिपि गर्न "को साथ बदल्नुहोस्" पाठ बक्समा एक प्रविष्टि क्लिक गर्नुहोस्।
त्यो प्रविष्टिको लागि सम्बन्धित सर्तहरू हेर्नको लागी वैकल्पिक रूपमा डबल-क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको कुञ्जीपाटीमा, तपाइँ प्रविष्टि चयन गर्न तीर माथि वा तल कुञ्जीहरू पनि थिच्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रतिस्थापन गर्न रिटर्न थिच्नुहोस्, वा स्पेसबारलाई हेर्नको लागि थिच्नुहोस्।
यदि तपाईँले बिभिन्न भाषा छायाकरण व्यक्तिगत शव्दहरूका लागि लागू गर्नु भयो भने, वा अनुच्छेदहरूमा, शब्दकोश लागू गरिएको भाषाका लागि प्रयोग हुन्छ.
Title is: शब्दकोश